Inkastoo uu jiro shaki lahayn awoodda iyo awoodda ah ka dib Dhibaatooyinka abuurista tayo sare leh, saamaynta xirfadeed ee nooc kasta oo video, mid ka mid ah waxyaalihii uu soo galayo kartaa habka loo yahay isticmaalka tuuryo keyboard. Halkan waxaan ku soo qaado ugu sareeya 10 timesavers ugu waxtarka badan waxaad dooran kartaa in aad dib Dhibaatooyinka aalada.
1. lakabka Guryaha
My tiro ka mid toobiye, sababtoo ah ma jiro mashruuc ee abid lagu sameeyey halkaas oo aan loo isticmaali Karin, waa tuuryo ee xulashada guri ka lakabka ah oo aan si buuxda oo dhan ballaariyo.
Tani dabcan waa uu diidanaa dhowr amarrada keyboard mid ku soo galeen, laakiin waxaan qabaa in ay kala tagaan, kuwaas oo la khiyaameeyay lahaa wax yar, runtii waa toobiye mid ah oo kaliya. Si aad u isticmaasho, si fudud u dooro lakabka oo riix badhanka ku haboon, hantida ku soo bixi doona.
A furmay ay noqoto Point
P furmay Wacan
S furmay Miisaanka
T furmay Opacity
R furmay wareegga
U shaaca ka qaaday dhammaan guryaha la keyframe ah
UU (double tuubada U) ayaa shaaca ka qaaday dhammaan guryaha bedelay
2. Ku dar Expression
Mid ka mid ah tani waa mid kale in uu helo wax badan oo isticmaalka iyo sidaa u muuqataa, sidoo kale waa run in aanay badbaadin waqti badan in nidaamka menu iyo sidoo. Alt for Windows, Option for Mac, oo guji stopwatch ee hantida ee aad ka dib waa.
Nice oo fudud dabcan, aad waxtar leh iyo timesaver ah kuwa animations adag. Waxaad kaloo isticmaali kartaa toobiye isla sidoo saarto hadal ah.
3. Samaynta lakabka cusub
Waxaad laga yaabaa in halkan ogaanaya theme ah, wax loo adeegsaday badan oo uu leeyahay toobiye ah oo ay halkaas u hesho si dhakhso ah, oo waa waxyaalahan tuuryo ayaa Been.
Sida aad arki karto waxaa jira tuuryo ee dhammaan noocyada lakabka caadi ah in laguu ogolaado in aad si deg deg ah ku darto lakabka cusub in mashruuc. Sababtoo ah cunnooyinka adkaha ah ay leeyihiin isticmaalo badan oo, isku taaga iyo wixii la mid ah, ay ku jiraan iyo sidoo kale haboon in la xasuusnaado. Kuwani waa dabcan, ku tuur daaqadaha, bedelo Control la Command u aficionados Mac.
Sidoo kale la soco toobiye ay ku darto daaha ka bedelaan si sahlan ugu hooseysa, mar kale isticmaali Command meel ka mid ah Control u Macs.
4. Miisaanka iyo reposition xulay layers ku haboon ka kooban
Boon A dhab ah haddii aad isticmaalayso noocyo kala duwan oo footage iyo lakab oo laga helay ilo kala duwan, taas toobiye yar xariif resizes iyo layers xarumaha in ay ku habboon ay ka kooban. Halkan aan taagay daaha ula kac ah u badan ka kooban, sida aad ka arki karto.
Si fudud u cadaadinaya Control Alt iyo F (Command Xulashada F u Macs) waxaa xarumaha sudhaan kooban oo kulan ay le'eg, oo dhan ee hal howlgal fudud.
Mid ka weyn, oo sidaad tidhi,, kuwa si joogto ah u isticmaalaan dad faro badan noocyada kala duwan ee ilaha caawinaad dhab ah in aalada ah.
5. RAM Kulanka Xiisaha Leh
Mid ka mid ah Tani waa mid ka mid ah tuuryo dheeraad ah oo si fiican u yaqaan, garaacid 0 on rada ay u bilaabaan Falanqeynta RAM ah in ku dhufto ee Mac ama Windows. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ka mid ah kuwa teebabka Mac wireless aan lahayn rada ah, Adobe u arkay taam u yahay inuu ku daro in toobiye dheeraad ah Mac kaliya si aad u hesho qiyaastii this, kaas oo ah Control iyo Zero.
Taasi laga yaabaa sidaas ma aha, si fiican u yaqaan iyo sidoo qiimihiisu Xusuuso ah halkan.
6. dhaqaaq Timeline loox
Kanu waa hanti weyn haddii aad markaa baahinaya maaskaro, isagoo intaa ku daray in isku dari kara mooshin ama graphic kale mooshin galay video ama howlgal la mid ah. In ay awoodaan si loo horumariyo ama la wiiqo waqtiga jir ah oo hal mar ah ku yimaado anfacaya xaalado badan. Aniga ahaan, waa socodka kala joogsi lahayn shaqada taasina runtii tani mid si waxtar leh, a press muhiim ah oo fudud oo aan ahay gal loox kale isagoo aan ka fikirin, iyo in uu yahay nuxurka toobiye muhiim ah.
Halkan mid dheeraad ah oo ah, laakiin aan run ahaantii toobiye gaar ah, waxaa hore u socda ama gadaal 10 looxyada waqti, sida waxtar leh xaaladaha qaar oo ku kacaya oo ay ku jiraan halkan.
Control Isticmaalka iyo midig ama arrow harsan PC, Command oo xaq u fallaadh harsan Mac for jir hal, ku dar wareejin in isku darka inuu u dhaqaaqo 10 loox.
7. Resize iyo reposition daaha
Tani waxay la mid tahay tirada afar toobiye, in in ay ku haboon lakabka kasta ka kooban, si kastaba ha ahaatee tani waxay ka mid haysaa saamiga dhinaca asalka ah halka u sameeyaa. Tani ma u muuqdaan kuwo laga yaabaa in farqi aad u weyn, laakiin marka la eego aalada ee wax looga qabanayo diyaariyeen ah ee looga baahan yahay iyo wixii soo baxayey, runtii waa.
Haddii aan dib ugu xaaladda hore tago lakabka ah in ka weyn tahay comp sida aan ka hor tusay.
Garaacista Control + Alt + wareejin + H (Command + Xulashada + Shift + H for Mac) waxaa haboon in comp laakiin hayaa saamiga dhinac ee hadda jira sida aan halkaan ku arko.
8. lakabka goo
Tani waa tallaabo kale oo sahlan in la samayn karaa iyada oo aan kalagoynta aalada ah iyadoo la isticmaalayo toobiye ah.
Daluugta ah lakabka in ay calaamadeysanayaan waqtiga waa tafatirka qalab qiimo leh marka la layers badan loogu tala galay in mar halkii ay isku mar ordo wax ka qabashada.
Tani waa mid aad u fudud in la sameeyo toobiye this, aad leedahay aad lakabka oo aad u baahan tahay si ay u joojiyaan waqti cayiman, si fudud u dhigay calaamadeysanayaan waqtiga ku meel saxda ah
Markaas si fudud u isticmaali Alt + [ama] daaqado, iyo Xulashada + [ama] Mac.
Tusaalahaan waxaan] jira ayaa loo isticmaalaa in lagu jar dhamaadka si ay calaamadeysanayaan waqtiga, ee [jar lahaa iyo bilowgii ilaa dhibic in.
9. Timeline Zoom in Single Frames
Haddii aad wax igu sida, si joogto ah aad raba in ay dib u soo u dhexeeya aragtida hal jir ee waqtiga iyo aragtida guud Ping sida aan u tago oo ay la socdaan. Inkastoo bar slider marna waa ka fog, inay awoodaan inay u Mozilla ku qumman inay ku yiilleen hal, ka dibna daafaca midig ka soo baxay in muddo ah ka kooban oo idil waa boon ah in aalada wax.
Waxaad ku gaari kartaa adigoo si fudud la isticmaalayo; muhiimka ah, labada Mac iyo daaqadaha.
10. Guuritaanka dhug-Timeline in ay lakabka gudaha iyo dibedda dhibcood
Our hal final, iyo mar kale toobiye kale aad u faa'iido badan ee ay marin-habaabinayaan layers badan oo isku xigxigta, footage aan kalagoynta aalada ah, haddii aad u baahan tahay in si deg deg ah loo horumariyo si ay hal dhibic ka soo lakabka aad hadda, si fudud wax miiran O, si ay u tagaan ee dhibic, jaraa'id waan , waa isku mid u ah Mac iyo Windows, mid ka mid ah u fududaynay xusuus darteed iyo sidoo mudan in sidaas la sameeyo waa.
Dabcan, waxaa jira in ka badan, Adobe soo saaro liis buuxa oo ka mid ah qaybta ay taageero, iyo sare ee in ay tahay haboon in la xasuusnaado in aad astaysto toobiye walba ee barnaamijka, si loo waafajiyo aad style shaqo oo u gaar ah haddii aad rabto in aad.
> Resource > Video > Top 10 ka dib Dhibaatooyinka tuuryo ku Video Faalladaada